Condo for rentv@ near Hledan
Mini Condo Flat for Rent in Yaw Min Gyi Area.
Sanchuang Condo For Rent
Office and Residential For Rent @ Kanbawza St
For Rent > Mini Condo အငှါး (လှိူင်) ## ဗဟိုလမ်း မေးတင်ဖြစ်ပါသည်။## >> ငှါးဈေး = 450000 ကျပ်(1 month) >> နေရာ = အမှတ်(13) ရပ်ကွက်၊ လှိူင်။ >> အကျယ် = 1152 sq-ft >> အခန်း(2)ခန်း= sinlgle + master >> ထမင်းစားခန်း၊မီးဖိုခန်း >> ဘိုထိုင်အိမ်သာ (2) လုံး >> ကြွေပြားကပ် ၊(5)လွှာ >> ဓါတ်လှေကား ၊ generator ပါရှိသည်။ >> ဂျိုးဖြူရေ ၊ ရိုးရိုးရေ (2) မျိုးလုံးရသည်။ >> ယခု နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ နေထိုင်ရန် ၊ ရုံခန်း ၊ small business ၊သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်ရန်အတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ကားမှတ်တိုင် ၊ရထားဘူတာ များလည်း ကပ်လျက်ရှိပါသည်။ပါရမီစိန်ဂေဟာနှင့်လည်းနီးကာ အေးချမ်း၍ စိတ်ငြိမ်သော နေရာလေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ <<< လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ုခြံ၊မြေနှင့်တကွ ကွန်ဒို ၊ဂိုဒေါင်များအား ရောင်ခြင်း၊ဝယ်ခြင်း၊ငှါးရမ်းခြင်းများပြုလုပ်လိုပါက photo၊ Deta အပြည့်အစုံနှင့်တကွ Viber မှတဆင့် ဆက်သွယ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ >>> ဆက်သွယ်ရန် ‍- ကိုဋ္ဌေးကိုကို 09-974223948 09-897707375 09-773571287 Viber. 09974223948 " အားလုံးစိတ်၏ကျန်းမာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကျပါစေ"">
Upper Pandoedan Road ,Sein &Mya Condo
Apartment for rent @ near Myanmar Plaza
ပြသည် 33-40 ၏ 354 ပစ္စည်းများ.